Sonke sizwile kaningi ukuthi umbono jikelele wokubukeka kwethu kuxhomeke ezintweni ezincane ezincane. Uma ufuna ukubukeka kahle futhi ukhangele, ngisho noma ungenayo imidwebo yokulwa nokugqoka, qaphela isimo sezinzipho zakho. I-manicure ephelele kunoma yisiphi isimo isiqinisekiso sokuthi uzohlale ubheka okuhle. Ungakha u-manicure onjalo ngokwakho, kubalulekile ukwazi ezinye izimfihlo zabachwepheshe.
1) Ngomuthi omncane we-moisturizer, hlalisa izandla zakho neminwe. Lokhu kuzonciphisa ukungezwani, kuthuthukise ukujikeleza kwegazi nokulungisa isikhumba ngenqubo.
2) Ukukhanyisa kufanele kube kuhle. Ngaphandle kokukhanya okujwayelekile okujwayelekile, ukukhanyisa okwengeziwe kuyadingeka, isibonelo, isibani setafula. Ngakho uzobona ukuthi wenzani ngemininingwane encane futhi ungenzi amaphutha.
3) Ngaphambi kokuba uqale u-manicure, susa izinsalela ze-varnish endala. Kule njongo, kungcono ukusebenzisa imikhiqizo ngaphandle kwe-acetone ngenomthelela wokuhlunga.
4) Bese unikeza izipikili ngendlela efanele. Thatha i-saw elihle elingalimazi izipikili zakho. Ukubona njalo kusukela emaphethelweni kuya enkabeni, lokhu kuzokusiza ukugwema ukudluliswa kwezipikili.
5) Faka amafutha amancane ukuze ususe i-cuticle bese uyishiya imizuzu embalwa ukuze uyisebenze. Lokhu kuyadingeka ukuze unciphise i-cuticle. Ngemuva kokusebenza kwamafutha, uthathe induku yokhuni yokugcoba umzimba, thutha i-cuticle bese uyisusa. Izinsalela kumele zihanjiswe esisekelweni se-nail. Lokhu kuyadingeka ukuze umqubu womzimba ubheke uphelele.
6) Ukuze ipulangwe ye-nail libe lushelelezi futhi likhazimule, yiphathe nge-blade ekhethekile yokuphosa. Ungabi nentshiseko ngale nqubo - kungenziwa kaningi izikhathi ezingu-1 kuya kwezingu-2 ngosuku lwesonto, uma kungenjalo ubungozi bokusika umcengezi wokuzivikela we-nail, okwenza ube mncane futhi ube nesibindi.
7) Sebenzisa indlela yokuqinisa izipikili. Kuzonciphisa umphumela onobungozi we-varnish, kuqinisekiswe ipuleti ye-nail bese uvumela i-varnish ukuba ihlale isikhathi eside futhi ilale ngokulinganayo.
8) Bese usebenzisa i-lacquer. Dya izipikili zakho, uqale ngomunwe omncane. Spread umugqa omkhulu phakathi nendawo yepikili, bese upende phezu kwemiphetho. I-varnish eyengeziwe kufanele isuswe ngebhayisikili, nezinsalela ezincane - nge-discton disc ehlanganiswe oketshezi ukususa i-varnish.
9) Ukuze ngisho nombala othobezelayo ugcwale, sebenzisa izingubo ezimbili ze-varnish. Uma nje ungqimba wokuqala umile, sebenzisa okwesibili.
10) Ukuze i-varnish yome ngokushesha, sebenzisa i-agent ekhethekile-eyomile ungqimba omncane.
11) Udinga ukuqedela u-manicure ngengubo ekhethekile. Ivikela izipikili, ivumela i-varnish ukuba ihlale isikhathi eside. Amathuluzi anjalo avame ukunikeza izipikili ukuthi zikhanye, ziphephe amanzi. Kuye, lo manicure kuzodingeka kwenziwe kaningi kaningi kanye njalo ezinsukwini 5 kuya 7, okuyinto elula kakhulu.
12) Izikhathi eziningana ngenyanga, vumela izipikili ziphumule, zihlanganise kuphela ngekhambi eliqinile noma elivikelayo.
13) Ungakhohlwa ukuvakashela inkosi yobuchwepheshe okungenani ngezinye izikhathi.
14) Izikhathi eziningana ngenyanga zenza izibhuku ezifudumele ngezandla nangezipikili, engeza ama-e-softening nama-agent aqinisa, amafutha.
15) Ungakhohlwa - i-manicure ephelele futhi isikhumba esilungisiwe sezandla. Ungayinaki imfucuza yamanzi, zama ukugeza izitsha ngaphandle kwamagilavu, unakekele izandla zakho kusuka ebanda futhi umndeni kusho ukuthi umile isikhumba sakho.
Imfashini ye-manicure iyashintsha ngokushesha njengoba imfashini yezingubo. Ungakhohlwa ukuthi i-varnish ekhanyayo yombala ocebile ifanele amaqembu, hhayi ihhovisi. Imibala eminingi ecacile iyadingeka ehlobo. I-lacquer ebomvu ne-manicure yesiFulentshi ibhekwa njengezigaba futhi iya cishe wonke umuntu. Ungasheshi ukukhulisa izipikili, manje ngezipikili ezinemikhono ezibude obude, futhi izipikili ezisezingeni eliphezulu ziyingozi kakhulu emvelweni. Kuwusizo ukuphuza njalo amavithamini akhethekile okuqinisa isikhumba, izinwele nezipikili - ngakho zizokhula ngokushesha futhi zibukeke zingcono.
Ungakhetha kanjani umbala ofanele we-nail polish?
Ukuhlunga emanzini amaningi: iholidi nsuku zonke
Manicure ephathekayo 2014: imibala yangempela, imidwebo
Indlela yokunakekela izipikili zakho?
Indlela yokukhetha ifayela elihle le-nail?
Isinyathelo, i-aerobics yabaqalayo
Umklomelo Wokuqala Wezobuhle WezeMpilo
Izinzuzo zamanzi emzimbeni womuntu
Kungcono kakhulu ukuveza ubisi lwebele
Kunokuhlanza oluhlaza esikhumbeni?
Apple izindandatho ebhiya ibhitter nge sinamoni
Hormonal isifo hypothyroidism
Indlela yokuphulukisa umfutho wegazi ophezulu ngamakhambi omuntu
Roll nge inkukhu nelayisi
Ama-biscuits e-Chocolate ngemifula
Ama-mushroom e-Oyster ku-batter
Owesithathu ungenasici noma ukuthi ungakhetha kanjani
Indlela yokwenza iparfini yokugqoka?
Indlela yokugqoka izindandatho ezandleni zakho iyimfashini futhi isitayela